Orodyahan Reer Kenya ah Oo Rikoor Cusub ka Dhigay Orodka Adduunka Ee ka Socday Jarmalka.(Sawiro) – Heemaal News Network
Orodyahan caan ah oo u dhashay dalka Kenya ayaa rikoor cusub u dhigay tartanka orodka adduunka , kadib markii uu ku guuleestay tartanka orodka adduunka ee ka socda magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Eliud Kipchoge oo 33 sano jir ah ayaa jabiyay rikoor horey ugu yaalay orodka adduunka, waxa uuna Orodyahankan reer Kenya oo hada dhigay rikoor cusub ku orday 2 saacadood, hal daqiiqo iyo 39 ilbiriqsi.
Orodyahankan reer Kenya ayaa lagu tiriyaa orodyahanada dunida ugu horeeya , waxa uuna Eliud uu noqday Orodyahankii ugu horreeyay ee ku ordda wax ka yar 2 saacadood iyo 2 daqiiqo.
Eliud Kipchoge ayaa horey guulo taariikhi ah usoo hoyiyay, waxa uuna hada sare u qaaday magaca qaarada Afrika gaar ahaan dalka Kenya, waxaana rikoorkan cusub uu dhigay ay noqotay mid si weyn loo hadal hayo.
NFD: Laboo Qof Oo Maydkooda La Helay Cid Dishayna Aan La Garanayn Iyo Labbo La Laayahay Raq Iyo Ruux
Waxaa dood iyo isqabqabsi uu la dhashay labo qof oo meydadkooda lagu arkay magaalada Wajeer ee Gobolka waqooyi Bari dalka Kenya kuwaas oo aan la ogeyn cidda dilkooda ka dambeysa. Gudoomiyaha magalada Wajeer iyo sidoo […]
Faahfaah kasoo Baxday, Duqeyn ay Ciidamada Kenya ka Geysteen FDeegaanka Ceel Cadde Ee Gobolka Gedo.
Waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan duqeyn ay ciidamada Keka geysteen deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya ayaa dhowr madfac ku tuuray deegaankan waxaana wararka ay sheegayaan […]
Gelinkii dambe ee maanta waxaa degmada Ceelwaaq Kenya ka dhacay rabshado sababay khasaare dhimasho oo illaa afar qof gaaraya. Rabshadahan ayaa bilowday ka dib markii maanta ciidanka Kenya ay degaan hoostaga degmada Ceelwaaq ay ku […]